Chikunguru 21, 2018 arun
CME Bitcoin neramangwana mushumo unoratidza wokutengesera vhoriyamu kukwira 93% mu Q2 2018
pakukura nomukaka pamusika munyika, ari Chicago Mercantile Exchange (CME) tweeted kuti avhareji vhoriyamu zuva nezuva Bitcoin neramangwana, yakura isingaverengeki 93% muna 2nd kota 2018. wo, rakavhurika kufarira Bitcoin kwakwirawo nenzira 58%, inova kuwedzera pamusoro 2,400 zvibvumirano.
Bitcoin neramangwana avhareji zuva vhoriyamu mu Q2 rakakura 93% pamusoro yapfuura kota, apo rakavhurika mubereko rakapfuura 2,400 zvibvumirano, munhu 58% wedzera. Dzidza zvakawanda pamusoro kutengesa #Bitcoin neramangwana: https://t.co/adjWVWXBPQ pic.twitter.com/UQWC3nGGrI
— CMEGroup (@CMEGroup) Chikunguru 20, 2018
Nokutendeka crowdfunding kuchikuva StartEngine zvino anobvuma Bitcoin kuti bhizimisi securities
StartEngine, mumwe US ​​inobva zvakarurama crowdfunding papuratifomu, akazivisa nayo anogamuchira mari zvipo muna Bitcoin. umbwa mu 2014, Kambani yakabatsira kusimudza guta anopfuura 150 startups. The SEC wacho Regulation Crowdfunding mitemo kutsanangura imwe mari portal anofanira kushanda mubhengi & mari chitoro investor muna escrow, kusvikira startup runosvika pasipasi chipfuro. saka, StartEngine akaita partnered pamwe Prime Trust, mubhengi Nevada nezveBhaibheri, kuzozadzisa ichi.
Prime Trust achachengeta kwete chete asiwo exchange BitCoins kupinda USD, zvichiita bhangi wokutanga kutsigira Bitcoin uye kudzivirira crypto vanoita, maererano mashoko kubva akasimba. Kushandisa chikamu ichi, mabhizimisi anogona kusimudza vaifanira kuti $1.7 miriyoni pagore. Zvinoshamisa, StartEngine haana kare akamutsa $5 mamiriyoni mari.
Kraken Daily Market Mushumo 20.07.2018
$170M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Previous Post:Blockchain News 20.07.2018
Next Post:Blockchain News 24.07.2018
Chikumi 15, 2019
Litecoin (LTC) to drop 73% ? / Cardano (ADA) nhau / Polymesh